अब बन्ने केपी ओलीको नयाँ सरकारमा बाबुरामले पाउने भए यस्तो नयाँ जिम्मेबारी ? – पुरा पढ्नुहोस्……
अब बन्ने केपी ओलीको नयाँ सरकारमा बाबुरामले पाउने भए यस्तो नयाँ जिम्मेबारी ?
काठमाडौं, ३ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी हुने चर्चा सुरु भएको छ ।
ढिलोमा अबको एक हप्ताभित्रै वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । ओली नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम सहभागी हुन चाहेको खुलासा भएको छ । यो खुलासासँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
हुन त बाबुरामले व्यक्तिगत रुपमा यस्तो चाहना अहिलेसम्म ओली वा अन्य एमाले नेताहरुसँग व्यक्त गरेका छैनन् । तर, उनको पार्टीका नेताहरुले ओलीलाई भेटेर यस्तो प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । हुन त बाबुरामले आफ्नो एक मात्रै चाहना भनेको अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिइसकेका छन् ।
अब स्थायी सरकार बन्ने भएकोले बाबुरामको चाहना ५ वर्षको लागि अर्थमन्त्री बनेर विकास योजनाहरु अघि सार्ने र कार्यान्वयन गर्ने चाहना छ । त्यही भएर होला, उनी निकटका नेताहरुले ओलीलाई बाबुरामको अप्रत्यक्ष रुपमा सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
Prevआजको सूर्य ग्रहण: कुन राशीलाई फाईदा, कसलाई बेफाइदा ? जानी राखौ
Nextरबि लामिछानेको एक बोलीले भारतमा मच्चियो शनशनी । बाहिरियो यस्तो भिडियो । ३ करोड नेपालीले हेर्नेपर्ने भिडियो भिडियो सहित
भिडियो सहित.. इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेल परिवार सहित पहिʼलोपटक मिʼडियामा,१० बर्ष सम्म श्रीमती र छोरालाई भेट्न सʼकेनन् …
आजको राशिफल:- वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ २९ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ जुन १२ तारिख…
आजको राशिफल : बि.स.२०७७ साल श्रावण १५ गते बिहिबार इश्वी सन २०२० जुलाई ३० तारीख